Is 2018 Iyo Gore Retail Rakafa? Heano Maitiro Ekuchichengetedza | Martech Zone
Muvhuro, April 16, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Jon Croy
Vana nevana pamoyo vakasiririswa zvakaenzana ne kudonha kweToyi 'R' Isu, indasitiri yakasimba uye yeketani yakasara yekutengesa yaingotarisa kumatoyi chete. Chiziviso chekuvhara chitoro chakabvisa tariro yese yekuti hofori yekutengesa - nzvimbo yekushuvira kwevabereki, humambo hwechishamiso kuvana - inogona kuponeswa.
Chiri kutosuruvarisa ndechekuti Toys 'R' Isu angadai akaponeswa.
Chitoro chakachengetwa nechitoyi chakabatwa nemambure mazhinji ekutengesa, uye haisi yega. Cushman & Wakefield vanofungidzira kuti US chitoro kuvharwa kuchakwira 33% muna 2018, kubvisa zvinopfuura zvuru gumi nezviviri
Pakati pekufa kweRadioShack, kuderera kweJCPenney uye kufarirwa kwevamwe vasingaverengeki, vatengi vari kurwara ne chitoro kuvharwa! zviratidzo uye misoro yenyaya. NaSears, Claire's uye tsoka Locker yakagadzirira kudurura zvimwe zvitoro, zvinhu hazvisi kutaridzika zvakanaka kune vatengesi-uye-dhaka vatengesi.
Tichifunga mamiriro acho ezvinhu, zvinogona kuyedza kubata mimhanzi yepashure yaDon McLean, nguva yese iyi ichiimba, 2018 ndizvo gore rekutengesa rakafa! Asi usaridze alarm izvozvi. Kune tariro kune vatengesi avo vari kuda kuchinjika uye vanogamuchira shanduko zhinji dzakachinja ruzivo rwevatengi rwekutenga.
Vatengesi vazhinji vari kunetseka kukunda iyo Maitiro eAmazon (pakati pezvimwe zvinhu), asi inguva yekuti izvo zvichinje. Nepo dot-com hofori yakaratidza kuve anopikisa anotyisa kuzvitoro zvetsika, hapana chikonzero nei vatengesi vasingakwanise kuona kugona kwavo chaiko.
Kuti vakunde mamwe ematambudziko makuru evatengesi, vatambi vezvidhina nedhaka vanofanirwa kugadzirira kuwedzera mikana muzvitoro, kutengesa zvakanaka uye kusimudzira zvinhu, kuzadza mukaha pakati pedigital uye panyama, izvo zvinopedzisira zvawedzera purofiti uye nekuvandudza ruzivo rwavo rwevatengi.
Chikwama vs. Kudiwa
Iri dambudziko rekare raigara richirova izvo zvaidiwa zveToys 'R' Isu uye Nesimba Mamiriro. Case in point: wakambofunga nezve nei wakashopota ku Toys 'R' Isu?
Vakuru vakaenda ikoko kunotenga zvipo ("Kudiwa"). Chikwama, zvisinei, chimwe kana mamwe madhigirii akapatsanurwa kubva kwaakabva Kudiwa. Chikwama hachidi kupinda muchitoro - ibasa.
Vatambi veSports Authority vakasangana nedambudziko rakafanana, sezvo vatengi vaiwanzo shopper vachigadzirira mwaka mutsva wemitambo. Ipapo vakaona kukwira kwemitengo uye vakaomerwa nekuenderera.
Pane imwe mamiriro - imwe apo vabereki vanofinhwa vanoda kuuraya nguva nevana vavo. Paunopinda chero chitoro, iyo Wallet haina hurongwa chaihwo hwekuparadzanisa nemari. Vabereki vanotora njodzi zvakadaro, vachitarisira kuti vanogona kupinda nekubuda zvakachipa.
Dzinotarisirwa mhuri ndiyo inosara. Vabereki vatsva ("Wallet") vanofara kutenga zvese zvavanoda. Iko kutsva kwemwana kutsva kune zvaakagumira, zvisinei, saka usatarisira kuti chishuwo chekuputika kuti chigare kwenguva refu mushure me:
Bhajeti yakapfuudzwa kwenguva yechina
Wechipiri mwana anouya
Vatengesi vanowanzoshaya mikana yekubatanidza isingamiriri Wallet nechido chakasimba. Kunyangwe paine dzimwe nguva pazvinogona kuita kunge zviri nyore (ex: mhuri dzinotarisira), zvinokwanisika kuunza Wallet uye Kudiwa padhuze pamwe chete na:
Kupa vatengi runyorwa rwakajeka uye rwakajeka rwezvinhu zvese zvirimo muchitoro
Kutsanangura kuti zvigadzirwa izvi zviripi
Kushandisa maturusi anogona kubatsira vatengi kutenga nenzira inoshanda, senge mamamepu kana zvinyorwa zvemadhijitari
Kugadzirisa marongero ezvitoro kuti uvandudze shoppability wechitoro
Kuita mapurogiramu ezvekutenga sekutenga pamhepo kunhonga muchitoro
Pakupedzisira, kana iwe uine mutengi asina kusungwa nezvitoro zvakaputsika, ivo havanyanyo kuverengera uye wechipiri-fungidzira zvavanotenga.
Shanduko yedhijitari yakanga isina chekuita nezvirongwa zvemukati. Izvo zvaive zvisina basa kana Retailer X aifunga iri zano rakanaka - vatengi ndakafunga kuti yaive zano rakanaka! Vakasimudzira shanduko yekunze, yetsika.
Ose maToys 'R' Isu uye Nesimba Chiremera vakapihwa mukana wekugamuchira shanduko yedhijitari uye vawedzere kubatanidzwa nenharaunda dzavo dzekutenga. Ivo pakupedzisira vakakundikana, asi mhedzisiro yaigona kuve yakanyanya kusiyana.
Mutambo Wemitambo: Semubereki ndaida kushanyira webhusaiti yekambani, kuzivisa mutambo wemwana wangu, ligi uye timu, uye ndinogashira cornucopia yemazano ezvinhu zviripo.
Zvidhori 'R' Isu: Zvino apa paive nemukana wekugadzira app apo vana vaikwanisa kutarisa kuburikidza nechero toy, kuvaka runyorwa runyorwa, wozoendesa kuna Amai naBaba kuti kusefa nekugovana (kuburikidza neemail, social media, nezvimwewo). Ingadai yakapa iri nyore - asi yakajeka - yekutenga mhinduro yemazuva ekuzvarwa, mazororo uye dzimwe nhambo dzakakosha.
Zvikafu / Hofisi Hofisi Zvitoro: Fungidzira rondedzero yezvinhu zvese zvakakosha zvechikoro izvo zvinogadzira otomatiki mushure mekuzivisa giredhi remwana uye kirasi runyorwa. Iine chitoro chemuchitoro, ficha iyi inogona kuve yakakosha kuvabereki vakabatikana.
Vatengesi vakati wandei vatadza kuziva kukosha kwenzvimbo yezvitoro, asi ndizvo chinhu chose kune vatengi. Kana zvitoro zvachembera, zvisina kuvakwa, zvisina kuumbwa zvakanaka, zvakaoma kufamba uye zvisina vashandi zvakanyanya, vatengi vanoenda kumwe kunhu, sezvo vachiri kutsvaga ruzivo rwakasiyana, asi rwusina musono rwekutenga - apa ndipo panotengeswa mutengesi anogona kununura.
Kuti vachengete mikova yavo yakavhurika, vatengesi vanofanirwa kunge vachifunga zvekare mafomu ekutanga ezvitoro nedhaka. Nekuwedzera mikana muchitoro, kuve newavo chikwama kana kudiwa, kunzwisisa vatengi vavo, uye kudzikisa musiyano uripo pakati pedigital uye panyama, vatengesi havafanirwe kunetseka nezve e-commerce hofori, kana kuvhara magedhi avo - nekuti vanenge vawedzera purofiti nekuvandudza ruzivo rwevatengi.
Tags: Claire'sCushman & Wakefieldkubvumidzwa kwedhijitarishanduko yedhijitariFoot Lockerjc penneyjcpenneymallszvitoro zvekutengesa muhofisiradio shackchitorochitoro utsvazvitoro zvinotengesasearsmasimba emitambozvinodyiwamatoyi r isu
John ndiye mubatanidzwa uye Chief Marketing Officer we Nongedzera Mukati. Point Inside yakagadzira inonyanya kuora, inoonekwa-yakapfuma uye inodhura inoshanda indoor mepu chikuva papasi.